Qurxinta qolka jiifka | Qurxin
Gurigeenna iyo xafiiskayagaba waxaan ku lahaan doonnaa dhowr qolalka jiifka, mid walba adeegsigeeda iyo isticmaalkeeda ujeedada. Sidaa darteed, waa muhiim inaan dhigno qurxinta iyo deegaanka ku filan mid kasta oo iyaga ka mid ah. Waxaan ku ciyaari karnaa midabada jadwalka, leh dhalada daahyada, oo leh iftiin iyo waliba walxaha yar yar ee aan dul dhigi karno sagxadaha ama aan si toos ah ugu dhejin karno darbiga. Waxaan ogaan doonaa xad la'aan fikradaha si loogu qurxiyo qolalka sida aan u jecleyn.
Waxyaabaha ay tahay inaad haysato iyo inaadan haysan qolka jiifka
by Maria Jose Roldan samee Bilaha 3 .
Shaki kuma jiro in qolka jiifku uu yahay mid ka mid ah qolalka ugu muhiimsan guriga, markaa…
Sida qurxinta qolkaaga u saameeya nasashadaada
by Susana godoy samee Bilaha 5 .
Ma ogtahay sida qurxinta qolkaaga ay u saamayso nasashadaada? Hagaag, xitaa haddii aadan rumaysan, waa mid ka mid ah...
Sida loo doorto saldhigga ugu fiican joodarigaaga
by Maria Jose Roldan samee Bilaha 7 .
Inaad si fiican u seexato waxay ku xirnaan doontaa arrimo kala duwan sida inaad haysato ...
Fikradaha cawlan ee qurxinta qol labanlaab ah
Doorka midabka cawlku ku leeyahay guryaheenna waa mid aan shaki lahayn maanta. Tobankii sano ee la soo dhaafay waxay noqotay...
Midabada ugu fiican ee lagu rinjiyeeyo gidaarada qolka jiifka
by Maria Jose Roldan samee Bilaha 8 .
Midabka gidaarada gurigu aad ayuu uga muhiimsan yahay inta aad ka fikiri karto...
Sida sariirta loogu labisto xilliga jiilaalka
Waa iska caadi in imaatinka qabowga, qurxinta guriga si buuxda isu beddesho, iyada oo ujeedadu tahay ...
Waa maxay joodariga xumbo xusuusta? Soo hel dhammaan astaamaheeda
by Maria vazquez samee Bilaha 10 .
Ogaanshaha astaamaha joodariyada noocyada kala duwan waa muhiim in la doorto midka saxda ah. Dalabka joodarigu waa ...
Sariiraha dul sabeynaya qolka jiifka, suurtagal ma tahay?
by Maria vazquez samee Bilaha 11 .
Sariiraha sabaynaya waxay qaab u siinayaan farxadda hurdada oo hawada laga joojiyay. Markii ugu horreysay ee aan arko ...
Afar fure oo lagu qurxiyo qolka dhalinyarada
Qolku wuxuu gabbaad u noqdaa kan ugu yar, oo ah meel ay marar dhif ah rabaan inay ka baxaan inta ...
Madax-madaxeedyada asalka ah ee dhallinta si loogu qurxiyo qolka jiifka
Muraayadaha madaxa waa cunsur aad muhiim ugu ah qolka jiifka. Waxay soo jiitaan dareenka sariirta waxayna sameeyaan ...
Sida qolka jiifka looga dhigo meel lagu nasto
by Maria Jose Roldan samee Sannadka 1 .
Qolka jiifka waa inuu ahaadaa meel guriga ka mid ah oo aad ku nasan karto oo aad ku nasan karto dhibaato la'aan. Waa…
Fikradaha lagu qurxiyo sariirta iyadoo leh alwaax madax leh
Sida loo sameeyo boodhadhka madaxa jaban
Qurxinta qolka jiifka ku duub cajaladda
Talooyin ku saabsan miiska miiskaaga
Sida loo qaabeeyo labiska dharka ragga
Sida loo qurxiyo qolalka dhalinyarada
Isku-dhafka midabada ee qolalka jiifka carruurta
Darbiyada qolka jiifka ku rinji buluug